FAQs - HANGZHOU LINAN HUASHENG YONKE IMIQATHANGO CO., LTD
Singumzi mveliso, asisasazisi okanye inkampani yorhwebo, ke ixabiso kufuneka libize kakhulu kwaye likhuphisane.
Singomnye wabanini bezinto eziphathekayo, ngoko sinokulawula umgangatho ekuqaleni kwaye ixabiso liyakhuphisana.
Ewe, sineemfuno ze-MOQ ukuba abathengi bafuna into eyenziwe ngokwezifiso okanye iphakheji.
Okanye unokukhetha ukuthenga ibhegi yephakheji ye-MOQ okanye iibhokisi, emva koko senza ukuthunyelwa okuninzi. Sinokugcina iibhegi ezingenanto okanye iibhokisi kwindawo yokugcina izinto kwiodolo yakho elandelayo.
Ewe sinokubonelela ngamaxwebhu amaninzi kubandakanya izatifikethi zemvelaphi; I-inshurensi; I-MSDS, kunye namanye amaxwebhu okuthumela ngaphandle apho kufuneka khona.
Iisampulu, ixesha phambili malunga neentsuku ezisi-7. Kuba imveliso mass, ixesha phambili iintsuku ezingama-20-25 emva kokufumana intlawulo yedipozithi. Amaxesha akhokelayo asebenza xa (1) siyifumene idiphozithi yakho, kwaye (2) sinemvume yakho yokugqibela kwiimveliso zakho. Ukuba amaxesha ethu akhokelayo awasebenzi nomhla wakho wokugqibela, nceda uye kwiimfuno zakho ngentengiso yakho. Kuzo zonke iimeko siya kuzama ukulungiselela iimfuno zakho. Kwiimeko ezininzi siyakwazi ukwenza njalo.
I-50% idiphozithi kwangaphambili, i-50% ibhalansi xa kuthelekiswa nekopi ye-B / L.